Hupenyu Reader Kuongorora - Pamhepo kuverenga kwepfungwa
Kuverenga zvinyorwa zvepfungwa > Life Reader Review
Gadzira tsika yakangoerekana yazadza zvirongwa zvekusaidzika kwekuverenga kwepfungwa
Kunyatsorongedza mafungiro epfungwa asati awana
Iwe unogona kuronga foni mberi
Vese mapepa anofanirwa kupfuurira kuedza kuverenga nekutsvaga chekuongorora chekuita kuti vashande LifeReader
Chirongwa chekutanga kwe $ $ chete .19 miniti yekutanga yako 10 maminitsi
Pane zvakasiyana-siyana zvekukurukurirana kusanganisira foni, kukurukura, uye email
Tsanangudzo dzepfungwa dzechirchiku kukubatsira kusarudza mutungamiri akakurudzira iwe
LifeReader yave ichipa mishonga yepfungwa kubvira 2008
Hapana chibvumirano chinopiwa pawebsite kana usina kugutsikana nekuverenga
Psychic rates inomhanya kupfuura mamwe makambani
LifeReader inotora kuongorora kwavo maitiro emapfungwa angakosha zvakanyanya, kusanganisira kuverenga kuongorora uye chekuongorora chekuita kwemhosva mukutora. Izvi zvinovimbisa kuti vadzidzisi vashoma vane ruzivo uye scam artists vakasunungurwa kunze, saka chete zvakanakisisa zvinogadzira kudonha.
Kutsvaga kwavo injini yekutsvaga kwakangoita zvishoma pane zvingasarudzwa, chete kugovera kutsvaga nemutengo, nyeredzi yepamusoro uye avo vari vatsva kunzvimbo. Kunyange zvakadaro, mapurogiramu ezvemapfungwa evanhu anowanzove akawanda kwazvo-akadzika kupfuura mamwe mawebhusayithi ekuverenga zvepfungwa, zvichienderana nehuwandu hwebasa rakaita sei nemapfungwa mune peji ravo. Tsvaga mhinduro yemudzidzisi kuti uwane pfungwa yekuti vanoita sei nevamwe vatengi vasati vasarudza.
LifeReader Mafungiro anotora zvishoma pane mamwe mawebsite, asi mumwe nomumwe apfuura nekuongorora zvakakwana uye pamwe vangave vaine mazano kune avo mazano. Mune mamwe mazwi, iwe unowana chaunobhadhara, kana iwe unofanirwa mune iyi nyaya. Iwe unogona kushandisa mukana mukuru wekutanga wekutora yako yekutanga 10 maminetsi chete $ $ .19 maminiti, kuitira kuti iwe unogona kuedza mumwechete kana vaviri vaparidzi vezvepfungwa vane mari shoma shoma.
Iwe unogona kutaurirana nemudzidzisi wepfungwa kuburikidza nefoni, kutaurirana, kana email, zvichienderana nezvinodiwa nemumwe wekuti vanopa sei mavhisi avo. Iwe unogona kunyange kutora nguva yekufonera kusati kwaitika, panzvimbo yekuedza kubata waunofunga mupfungwa nemukana.
Zvinenge zvisingashamisi kuti pane webhusaiti saka uchenjere nezvekuongorora maitiro avanoita mari, kuti havatauri rudzi rwekugadzirisa hurumende, kana kuti havana kana imwe yakataurwa pawebsite. Paunenge uine mukana wakanakisisa wekuverenga zvakanyanya paunosarudza kubva mudziva revazivi vepfungwa vane ruzivo, pane dzimwe nguva haufaniri kusangana nemumwe munhu wepfungwa. Chibvumirano chekupa mari yekubhadhara kana chikwereti chaive chinhu chakakosha kune iyi inoremekedzwa zvikuru yekuverenga webhusaiti.
ne LifeReader, iwe unogona kubhadhara zvishoma pane dzimwe nzvimbo dzekuverenga zvepfungwa, asi unogona kuva nechokwadi chokuti chero mupi wezano iwe unobata pawebsite yave yakanyatsoratidzwa zvose zvepfungwa dzepfungwa uye chero yeruzivo rwemhosva. Dzimwe nguva zvakakosha kubhadharira zvishoma, kunyanya kana uri kuswedera kutungamiri hwepfungwa sechinhu chakakomba uye kwete chimwe chinhu chisina maturo kuti uite kuti ufare.